Idolobha ligqugquzela amaqhinga akha ubuhlobo ngemidlalo – Msunduzi News
Imindlalo idale ubunye yengeza nasemnothweni wendawo
Kukhona ukuvumelana emhlabeni jikelele kokuthi ezemindlalo ziyikhubalo elinguzifozonke. Kwezemidlalo umuntu akagcini nje ngokuba nempilo kepha njengoba sibonile kule minyaka eyedlule ngemindlalo yamazwe ngamazwe, ukuthi ezemidlalo ziyakwazi ukwakha ubuhlobo, ukuphikisana nokuthula ezweni nasemhlabeni. Empeleni ezemindlalo njengoba sibonile kwenzeka phakathi kweNorth Korea neSouth Korea ziyakwazi ukuhlanganisa imihlambi eyalanayo. Ekuqaleni kwenyanga kaZibandlela uMsunduzi ube yinkundla lapho abantu, ikakhulukazi intsha evela kuso sonke isifundazwe ibuthana khona ngenhloso yokuzodlala nokwakha ubuhlobo. Le midlalo eluchungechunge nebizwa ngama-South African Local Government Association (SALGA) ivulwe ngokusemthethweni mhla ziyisi-6 kuZibandlela ezinkundleni zemidlalo zokusubatha i-Athletics Track Stadium.
Ilanga ebelikhipha umkhovu etsheni ligqamise ubukhazikhazi balo mncimbi obubona ngemibalabala yezevatho zamaqembu ehlukene abevela ezifundeni ezili-11 nezakha oMasipala abakhulu baKwaZulu-Natal. Wonke amaqembu abengena ngehubo ekundleni nobekwenza ukuncintisana kube ngokuhlabahlosile. Phakathi kwezikhulu ebeziyingxenye yokuvulwa bekukhona uSihlalo kaSALGA eSifundazweni iKwaZulu Natal, iKhansela Mluleki Ndobe noyiMeya yaseHarry Gwala, iMeya kaMasipala weSifunda uMgungundlovu, iKhansela uThobekile Maphumulo kanye neMeya yoMsunduzi, iKhansela uThemba Njilo.
Ekhuluma naleli phephandaba uNjilo uthe ukubanjwa kwale mindlalo eMsunduzi kufaka isigxivizo sokuthi kancane kancane lo Masipala uyamukelwa njengekhaya lemidlalo njengoba nonyaka like laba nemindlalo esezingeni lezwekazi iAfrika. Khona lapho ube eseveza ukuthi akukhona ukudlal nje kuphela kepha likhona nevenge lezomnotho.
“Le midlalo izosingathwa kahle ngokwezinga eliphezulu ngoba sifisa bonke abavakashele edolobheni lethu bahambe bejabule. Imidlalo yamaSALGA isimamise umnotho wendawo. Kuyimanje amahhotela ethu agcwele wonke nosekuphele isonto. Le midlalo isinike nethuba lokuzikhangisa kubantu abavela kwezinye izindawo nesifisa baye sebeyizivakashi kule ndawo yethu ,” kusho uNjilo.
Uqhube wathi elinye ithuba abalitholile ngale midlalo elokuxhumana nabahwebi abadayisa ukudla egwaqeni nathe bakwazile ukuba babe nomhlangano obufundisa ngemithetho ebhekelele ukudayiswa kokudla emphakathini nokuyinto edinga onompilo nolwazi lwemithetho yendawo. “Abadayisi bethu baqeqeshwe wuPhiko i-Environmental Health kanye nophiko lakwaWaste nobekuyinto esineqiniso lokuthi kuzoba wumphako wangunaphakade kubo,” kusho iMeya.
Odabeni lokuqhakambisa ubunye uNjilo uthe: “Siyisizwe sikaBaba uMandela indoda eyabe iqhakambisa ubunye kubantu. Bheka nje iqembu lethu laseMgungundlovu lihlanganise zonke izinhlanga, kunjalo nakwezinye izindawo. Lokhu kwenziwa kubantu abasha ukuze nabo nakhule bazi ukuthi leli lizwe ngeke liye ndawo uma singabambene, futhi singabambisene. NjengoMandela ngiyakholwa ukuthi ezemidlalo zingaba yikhubalo lokulapha ukwahlukana emphakathini yethu nasesintwini nje jikelele,” kuphetha uNjilo.
Usihlalo weSALGA KwaZulu Natal, uNdobe enkulumweni abe nayo naleli phephandaba uthe inhlosonqangi ngokuhambela izifunda ngale mindlalo wukwakha ubunye kanye nokuthuthukisa umnotho wendawo. “Siyazishintshashintsha izifunda, ngenxa yokuthi uma sifika nale midlalo kumele sishiye ifa kuleyo ndawo. Ngoba uma kuza imidlalo kuvuselelwa izingqalasizinda, nokuba yifa elizosalela loyo masipala,” kusho uMnu Ndobe.
Echaza kokuqhathwa kwamaqembu ezifunda kule midlalo uthe lapha kuqhudelana oMasipala beZifunda abali-10 neMetro okuyiTheku. Uhlelo lokuhlungela abadlali abazoba yingxenye yale midlalo luqala emiqhudelwaneni yamawadi, idlulele kweyomasipala, kudlulele kweyesifunda bese kuba eyesifundazwe. Imidlalo edlalwayo ili-16, phakathi kubalwa ibhola likanobhutshuzwayo, ibhola lomnqakiswano, ukubhukuda, itshesi (chess), umdanso, ibhola lombhoxo, ibhola lomphebezo neminye.
Ngevenge lomnotho wendawo uthe: “Isifunda ngasinye sibophele abadlali abangaphezu kwamakhulu amahlanu kuya kwabayinkulungwane, nokusho ukuthi kunabadlali abalinganiselwa ezinkulungwaneni ezili-10; okusho ukuthi abamahhotela bayahlomula kakhulu, ezokuthutha zihlomula kakhulu,” kusho Ndobe.
UCaleb Cotton (12) odlala ibhola lomphebezo kwabangaphansi kweminyaka eli-16 ukhombise ukujabula kakhulu ngokuba yingxenye yamaSALGA okokuqala ngqa empilweni yakhe. “Ngifuna ukumela indawo yangakithi, sinqobe. Njengoba kuzobe kungokokuqala ngidlala kule midlalo ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi nangonyaka ozayo ngizodlala,” kusho uCotton.
Omunye wabahleli balo mcimbi uMnu Siwelile Zimu osebenzela uMasipala uMsunduzi uphawule ngezinye zezizathu okuqokwe ngazo uMsunduzi njengendawo lapho kuzobanjelwa khona le midlalo uthe: “Ngisola ukuthi uMsunduzi ukhethwe ngokuthi kulesi sifunda saseMgungundlovu, iwona omkhulu obunengqalasizinda ezingconywana ezidinga ukulungiswa lapha nalaphaya, uma uqhathanisa nabanye omasipala abangaphansi koMgungundlovu.”
Ube eseveza ukuthi izinkundla ezisetshenziswe kule midlalo azikhethwanga uMasipala uMsunduzi kodwa zikhethwe ikomidi elibizwa ngeLocal Organising Committee elenziwe uMgungundlovu kanye noMnyango Wezemidlalo Nokungcebeleka.
UZimu ukuvezile ukuthi inkinga ababe nayo njengoMasipala uMsunduzi eyokuthi izindawo okumele kudlalelwe kuzo bezingekho esimweni esigculisayo kwadingeka ukuthi kuqinisekiswe ukuthi zisesimweni sokusingatha le midlalo. “Imidlalo isingethwe yisifunda uMgungundlovu, izinkundla zokudlala ezaseMsunduzi. UMsunduzi uchithe imali eyizigidi ezilinganiselwa kweziyisi-R7.4 ekutheni kulungiswe izinkundla zemidlalo” ubeke kanje. Ube esesho ukuthi ayikho imali uMsunduzi oyikhiphele imidlalo qobo kodwa bekungukulungisa izindawo ezizosetshenziswa, bekumele kulungiswe izinto ezifana nezindlu zangasese, ukubiya kanye nokupenda.
“Siyawamukela umcimbi okanje singuMsunduzi ngoba nombono wethu uyasho ukuthi sifuna ukwakha idolobha eliphephile, okulula ukusebenza, ukwakha, ukuhlala kanye nokudlala kulona. Imidlalo yamaSALGA ihambisana kakhulu nombono wethu. Ukusingathwa kwemidlalo efana nale kusho lukhulu kanti futhi kuyithuba elikahle kithina lokuthi siqhakambise izinkundla zemidlalo esinazo. Uma ucabanga inkundla yezemidlalo esanda kwakhiwa i-Athletics Track izobe iqala ukusebenza kuleli zinga njengoba kuzobe kukhona iSifundazwe sonke iKwaZulu-Natal, okusho ukuthi izikhulu zezimidlalo eSifundazweni nakuZwelonke zizobe zikhona ukuzobona le nkundla entsha eMsunduzi,” kusho uMnu uZimu.
Previous post: Inqabakutholwa esikoleni sakobantu kwaMachibisa
Next post: Isikhathi sikaNcibijane eMsunduzi